Tsy ny olon-drehetra no mahita ny tranokalanao | Martech Zone
Ho an'ny mpitantana tranokala amin'ny orinasa marobe, lehibe na kely, ity vanim-potoana lasa ity dia ny ririnin'ny tsy fahafaliany. Manomboka amin'ny Desambra, ampolony Ny galeran'ny zavakanto any New York City dia voatonona amin'ny fitoriana, ary tsy irery ireo galeraly. Didy aman-jatony maro no napetraka tato ho ato amin'ireo orinasa, andrim-panjakana, vondrona mpiaro ary koa ilay tranga pop Beyoncé, izay tranonkala dia nomena anarana tamin'ny akanjo fitondra-kilasy napetraka tamin'ny Janoary.
Ny faharefoana itovizany? Ireo tranonkala ireo dia tsy azon'ny jamba na sembana hita maso. Ny fitoriana vokatr'izany dia napetraky ny mpitory mba hanerena ireo orinasa hampiditra ny tranonkalany fanarahana ny lalàna Amerikanina manana fahasembanana, amin'izay mahatonga azy ireo ho azon'ny jamba sy sembana amin'ny fahitana.
Raha miasa tranokala ianao ho anisan'ny asan'ny fikambanananao, ny fanontaniana tokony hapetrakao dia:
Azo idirana tanteraka ve ny tranokalako?
Makatona ny mpanjifa mety hitranga ve ianao?
Ny olona jamba sy manana fahasembanana amin'ny fahitana toa ahy matetika dia tapaka - na dia tsy fanahy iniana aza - avy amin'ny tapany lehibe amin'ny fiainana izay noheverinao ho tsy misy dikany. Ny ahiahy momba ny fanakatonana ny mpianatra jamba tsy hianatra an-tserasera no nanery ahy hanoratra lahatsoratra momba ny filàna famolavolana manerantany ho an'ny 8 Meyth 2011 fanontana ny Chronique of Higher Education, sanganasa natao hanentanana ny mpanabe sy ny ekipany IT.
Ny lalàna Amerikanina manana fahasembanana
Ho an'ny jamba, izany dia mila fidirana amin'ny tranokala - sy ny Fanarahan-dalàna ADA izay afaka miantoka azy - mipaka amin'ny sehatra rehetra, manomboka amin'ny fanabeazana ka hatrany amin'ny orinasa, serivisy, andrim-panjakana ary fikambanana hafa. Raha mahita ianao, dia eritrereto ny fiankinan-doha amin'ny Internet amin'ny asanao isan'andro sy ny fiainanao an-trano. Firy ny tranokala vangianao amin'ny andro mahazatra? Alaivo an-tsaina hoe hanao ahoana izany raha tsy afaka miditra amin'ireo tranokala ireo ianao, ary saika isan'andro dia sendra zavatra maro izay tsy vitanao tsotra izao.
Na eo aza ny lalàna, tsy azo idirana ny fidirana amin'ny tranonkala ara-drariny sy mitovy. Ny fanakatonana azy, ny fandavana ny fidirana amin'ireo tranokala izay iankinan'ny varotra, orinasa, ary ny fiainana eto amintsika manokana ankehitriny, dia mety hahatonga ireo mpitory jamba handeha hiakatra fitsarana. Rehefa mametraka fitoriana ny mpitory, dia mitanisa ireo Ada. Mety tadidinao ny ADA ho toy ny lalàna manampy ny seza misy kodiarana hahazo fidirana amin'ireo tranom-panjakana, saingy tsy izany ihany no izy.
Ny Amerikanina manana fahasembanana (ADA) dia manaiky fa olona manana rehetra manana fahasembanana ny zon'ny fidirana mitovy, ao anatin'izany ny jamba sy sembana amin'ny fahitana, ary midika izany fa fidirana amin'ny media nomerika sy an-tserasera ankoatry ny habaka ara-batana. Io no ivon'ny olana amin'ny tondra-dranon'i ADA ankehitriny.
Ny olona jamba sy sembana dia mampiasa mpamaky iray hanampy antsika hitety sy hampiasa tranokala. Ny mpamaky mamaky ny ao amin'ny efijery ary mamaky amin'ny feo avo azy amin'ny alàlan'ny elektronika, ahafahantsika miditra amin'ny zavatra tsy hitantsika. Teknolojia mampitovy ny kianja filalaovana izy io.
Saingy, voahidy ara-bakiteny isika rehefa mifanena amin'ny tranokala izay tsy misy kaody mba hotetezinay. Raha manandrana manafatra enta-mavesatra ianao dia manorata efitrano fandraisam-bahiny na miditra amin'ny tranonkalan'ny dokotera ary tsy natsangana ny tranokala hidirana, dia vita ianao. Alao an-tsaina ny fanandramanao hamita ny asanao nefa tsy afaka mamaky ny efijery; izany no atrehin'ny mpiasa jamba sy sembana isan'andro.
Sakano ny tranokalanao tsy ho tonga voditongotra Achilles
Ho an'ny orinasa lehibe, dia mandeha mahitsy ny hetsika mankany amina fanamboarana. Manana ny enti-manana sy ny fanarahan-dalàna, ny mpiasa ara-dalàna ary ny IT izy ireo mba hampifanaraka haingana ny tranonkalany mifanaraka amin'ny takian'ny ADA. Azon'izy ireo atao ny mamolavola endrika vaovao sy manoratra kaody haingana mba handraisana ny filan'ny mpitsidika jamba, manome alàlana ary manome fitsidihana.
Saingy, orinasa sy fikambanana madinidinika sy antonony matetika no iharan'ny fanamby. Amin'ny resadresaka vaovao, tompona orinasa kely sy salantsalany nantsoina tamin'ny fitoriana ADA dia nilaza fa mahatsapa ho marefo izy ireo.
Izy io dia azo resahana mora foana amin'ny tombontsoan'ny tsirairay. Ny fifampidinihana amin'ireo vondrona mpiaro ny jamba sy ny sembana amin'ny fahitana dia mety ho fanombohana lehibe ho an'ireto fikambanana ireto, ary misy torolàlana maromaro tsy tokony ho adino rehefa manomboka ny fizotran'ny fanatanterahana ny fanarahan-dalàna ADA amin'ny tranonkalany izy ireo.
Inona no azonao atao mba hahazoana antoka fa azo idirana ny tranokalanao
Inona no azonao atao raha manana orinasa ianao ka te hisoroka ny fanerena anao hanaraka ny raharaha fitoriana sivily? Ny vola mialoha ny olana dia kely ny vidiny ary ny fihetsika feno fahendrena:
Miaraha miasa amin'ny tompon'andraikitra amin'ny fanarahan-dalàna na amin'ny matihanina mba hahazoana antoka fa mifanaraka tanteraka amin'ny tranokalanao Fitsipika ADA ary ny fenitra fidirana an-tranonkala WCAG 2.0 / 2.1 ekena iraisam-pirenena;
Mitadiava torohevitra avy amin'ireo vondrona mpiaro ny jamba na sembana amin'ny fahitana, toa anay. Afaka manolotra izy ireo consultations tranokala, fanaraha-maso, ary ny fidirana amin'ireo fitaovana afaka mitazona anao hanaraka;
Amporisiho ireo kaody sy mpamorona atiny anao hanatsara ny tranonkalanao amin'ny alàlan'ny:
Tombontsoa marika, rohy ary sary misy famaritana lahatsoratra, fantatra amin'ny hoe alt tags;
Amboary ny endrika amam-bika mba ahafahan'ny loko mialoha sy ny fiaviana mifanohitra;
Hamarino fa mora mivezivezy ny tranonkalanao a interface interface.
Use fampiofanana maimaimpoana ary loharanom-pahalalana an-tserasera hijanona eo ambonin'ny lalàna.
Mpiara-miasa amin'ireo fikambanana sy orinasa hafa, mifanaova antoka mba hahatonga ny tranonkalanao ho azon'ny olona sembana ara-pahitana amin'ny fe-potoana voafetranao.
Ireo hetsika ireo dia mahasoa ny fikambanana amin'ny lafiny maro: amin'ny fampidirana olona an-tsitrapo dia manasa mpanjifa sy mpanohana maro ianao amin'ny alàlan'ny tranonkalanao - ny varavarana fidirana amin'ny fikambanananao. Amin'ny alàlan'ny fitarihana dia manatsara ny fahitan'ny besinimaro ianao; mitombo ny sandanao rehefa mamorona fotoana bebe kokoa ahazoana miditra ianao. Izany no antony Lighthouse Miami ho an'ny jamba sy sembana ara-pahitana dia iray tamin'ireo nanolotra orinasa sy orinasa manerantany consultations tranonkala hiantohana ny fanarahana ny ADA.
Farany, ity dia ny fanaovana ny tsara. Amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fidirana dia manaraka ny lalàna ianao ary manome antoka fa ny olona - na inona na inona fahaizany - dia omena fotoana mitovy amin'ny olon-drehetra. Tsy rariny fotsiny izany, fa amerikana voajanahary, ary ny orinasantsika, ny andrim-panjakana ary ny kintana lehibe toa an'i Beyoncé dia tokony hahatsiaro izany. Ny fandraisana an-tanana dia tsy a tsara zavatra - io ilay marina zavatra.
Tags: Adamihetsika ny amerikana manana fahasembananajambafitorianamalemy saina
Ahoana ny fomba fivarotana ny faharetan'ny marikao?